Guddoomiye Yariisoow oo Shacabka Caasimadda ku ammaanay la shaqaynta Ciidanka ammaanka – Wakaaladda Wararka Soomaaliyeed
Guddoomiye Yariisoow oo Shacabka Caasimadda ku ammaanay la shaqaynta Ciidanka ammaanka
Muqdisho-(SONNA)-Duqa Magaalada Muqdisho ahna Guddoomiyaha Gobolka Banaadir, C/raxmaan Cumar Cusmaan (Yariisoow), oo Xalay guddoomiyay Shirka amniga Caasimadda ayaa sheegay in is beddel weyn lagu sameeyay sugidda nabad gelyada.
Shirkan oo ay goob joog ka ahaayeen Saraakiisha laamaha ammaanka ayaa lagu Lafa guray xaaladda amni iyo halka ay marayso.
Guddoomiye C/raxmaan yariisoow ayaa sheegay Saddex Bil iyo 10 Cisho ka hor, la dejiyay qorshaha ammaanka Caasimadda, aadna looga dareemay ammaanka Gobolka Banaadir inta uu shaqeynayay qorshahaas
Wuxuuna sheegay in ay laamaha ammaanku fashiliyeen qarax iyo isku day weerar, oo Shalay ka dhacay Muqdisho, taasina ay marqaati ka tahay in Ciidamada geesiyaasha ah ay u heellan yihiin difaaca Dalkooda, isagoo sidoo kale ku ammaanay Shacabka caasimadda feejignta weyn ee ay muujiyeen.
Wuxuu sheegay in ay maamulka Gobolka, Degmooyinka, hay’adaha ammaanka iyo Shacabkuba ay ka dhaxayso wada shaqayn buuxda, taas oo sababtay in ay Habeen kasta qabtaan Shir looga hadlaya ammaanka Caasimadda iyo halka uu marayo.
Guddoomiyaha ayaa Askarta aan ku jirin shaqada ee maraya Waddooyinka faray in ay isu sheegaan Ciidanka ammaanka ee ku howlan sugidda ammaanka Caasimadda, si aysan ugu soo dhex dhuuman Argagixisada Al-Shabaab.
Guddoomiyaha ayaa Dadka leh Gaadiidka noocyadiisa kala duwan ugu baaqay in ay samaystaan aqoonsiyo lagu garto oo ay is diiwaan geliyaan, si ay u noqdaan muwaadin dhab ah oo Soomaaliyeed, haddii kale ay ciqaabteeda mudan doonaan.
Wuxuuna Guddoomiyuhu sheegay in ay Ummadda Soomaaliyeed leedahay Hal cadow oo keli ah , kaasina uu yahay Al-Shabaab, meel qurana ay ugu soo wada jeestaan, isagoo ku ammaanay Dad weynaha Muqdisho sida ay Habeen iyo Maalin u Garab taagan yihiin Ciidanka amniga.